Nagarik News - कट्रिनाले सलमानको उपहार कार के गर्लिन्?
होमपेज / कला / बलीवुड / कट्रिनाले सलमानको उपहार कार के गर्लिन्?
कट्रिनाले सलमानको उपहार कार के गर्लिन्?	04 Aug 2013 | 19:36pm आइतबार २० श्रावण, २०७०
मुम्बई— स्पेनको समुन्द्रिक तटमा रणवीर कपुरसँगका बिकिनी तस्विर सार्वजनिक भएपछि कट्रिना कैफ मिडियामा सर्वत्र छाइन्। त्यसका लागि उनले सार्वजनिक विज्ञप्ति निकालेरै मिडियाकर्मीलाई आफ्नो सम्बन्ध बारे धेरै 'नउछाल्न' आग्रह गर्नु पर्‍यो। पछिल्लो समय मिडियाहरु रणवीर र कट्रिनाको सम्बन्धलाई लिएर अझ अगाडि बढेर लेख्दैछन्। सलमान खानले कट्रिनालाई उपहार दिएको कारले उनीहरुलाई अवरोध पुर्‍याइरहेको खबर छ। रणवीरसँग सम्बन्ध कस्सिँदै जाँदा 'कवाबमा हड्डी' बनेको सो कार कट्रिनाले बेच्न लागेकी छिन्। त्यसका लागि उनले छिमेकी र एजेन्टसँग कुरा अघि बढाएकी छिन्।कुनै बेला सलमानकै प्रेमिका रहेकी कट्रिनालाई गत वर्षको जन्मदिनमा सलमानले कालो कार उपहार दिएका थिए। « सलमानलाई बेलायतले भिसा दिएन
दीपिकाको नेपाल सम्झना »